version 0.7.1 – သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရထားကိုလှိမ့စောင့်ရှောက်
ဇန္နဝါရီလ 31, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု9comments
transposh ပေါ်တွင်အလုပ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာစတင်ရန်ဖြစ်သည်, ဗားရှင်းသစ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသောအခါကျွန်တော်ယေဘုယျသုံးစွဲမှုအတွက်လူထုမှလွှတ်ဖို့ကြိုးစား. ဒီအသေးအဖွဲဗားရှင်းမဆိုအသစ်အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုမပို့ဆောင်ပါဘူးဒါပေမယ့်အာရုံစိုက်မှုကိုလိုအပ်သောသူအချို့အချက်တွေကိုပြုပြင်ဖို့သွားဘူး.
ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ထိုပြောင်းလဲမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးနိုင်ပါတယ်:
plugin ကိုနှစ်ခုဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်များကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်, ၏အကူအညီနှင့်အတူဒတ်ခ်ျ Roland Nieuwendijk နှင့်ရောမ Matusevics ၏အကူအညီဖြင့်ရုရှား. သင်ကူညီလိုပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရကျေးဇူးတင်ကြောင်းရ (နှင့်ခရက်ဒစ်)
ကောက်နုတ်ချက်များ၏ marking tp_language ရေးသားချက်များအဘို့အ fixed ခဲ့သည်
သိသိသာသာဘာသာပြန်ချက်များ urls အပေါ်ဒေတာဘေ့စမေးမြန်းချက်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ (ထောင်ပေါင်းများစွာသောတဦးမှ)
အမည်မသိဘာသာပြန်ချက်မဟုတ်တဲ့ google မှာအင်ဂျင်အပေါ်ထောက်ပံ့မသည့်အခါအော်တိုဘာသာပြန်ချက်များအတွက် Fix
buddypress Fix (နှင့်မျှော်လင့်အခြား) တစ်ခုတည်းလှုပ်ရှားမှုများစာမျက်နှာများနှင့်အခြားနှစ်ဆကိုပြန်ညွှန်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပြန်ညွှန်း
ပို့စ်ဘာသာပြန်ချက်ပြီးနောက်အတူဆုတ်ယုတ်များအတွက် Fix အပေါင်းတို့နှင့် translate
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: လှူဒါန်းခဲ့ဘာသာပြန်ချက်, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, မြန်နှုန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ